Ny fanararaotana ny zaza na ny tsy firaharahiana ny ankizy izay mitranga aorian’ny fahaterahana dia hita miharihary kokoa. Zaza efa ho valo tapitrisa no maty alohan’ny faha-dimy taonany manerana izao tontolo izao, ary ny ankabeazany dia avy amin’ny aretina izay sady azo sitranina no azo sorohina.4 Ary ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana dia nitatitra fa iray amin’ny ankizy efatra no tsy mitombo ara-tsaina sy ara-batana araka ny tokony ho izy, noho ny tsy fahampian-tsakafo.5 Noho ny fipetrahanay sy fandehananay any amin’ny toerana maro samihafa manerana izao tontolo izao, dia mahita betsaka amin’izany izahay mpitondra ato amin’ny Fiangonana. Nanao tatitra mikasika ireo zaza miaina ao anatin’ny toe-javatra “mihoatra noho izay azontsika eritreretina” ny fiadidian’ny Kilonga maneran-tany. Hoy ny reny iray tany Philippines hoe: “Indraindray izahay dia tsy manana vola ampy hividianana sakafo, saingy tsy maninona izany satria manome ahy fahafahana hampianatra ireo zanako momba ny finoana. Mifamory izahay ary mivavaka mba hahazo fampiononana, ary mahita ny Tompo mitahy anay ireo ankizy.”6 Tao Afrika Atsimo, dia nifanena tamin’ny zazavavy kely iray izay nanirery sy nalahelo ny mpiasa ao amin’ny sekoly ambaratonga voalohany iray. Rehefa namaly tamin’ny feo malefaka ireo fanontaniana feno fitiavana ilay zazavavy, dia nilaza fa tsy nanana reny sy ray ary renibe izy—fa raibe ihany no mikarakara azy.7 Hitovizan’ny olona maro ny zavatra mam